Heshiis iskaashi oo ay kala sixiixdeen Jaamacadda Imaam Shaafici iyo Akeedimiyadda sare ee Daraasaadka Istiraatiijiga iyo Amniga ee dalka Suudaan. | Imam Shaf'i University
Heshiis iskaashi oo ay kala sixiixdeen Jaamacadda Imaam Shaafici iyo Akeedimiyadda sare ee Daraasaadka Istiraatiijiga iyo Amniga ee dalka Suudaan.
Imam Shaf'i University - Heshiis iskaashi oo ay kala sixiixdeen Jaamacadda Imaam Shaafici iyo Akeedimiyadda sare ee Daraasaadka Istiraatiijiga iyo Amniga ee dalka Suudaan.
Heshiis iskaashi oo ay kala sixiixdeen Jaamacadda Imaam Shaafici iyo Akeedimiyadda sare ee Daraasaadka Istiraatiijiga iyo Amniga ee dalka Suudaan oo ah akeemiyad Caan ka ah wadamada carabta dhaxdooda iyo caalamkaba loogna yimaado wax barashadeeda wadamadaas badankood.
Alx Guul Bahda ISHU iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed.